Waa tee Kooxda haatan hoggaanka u haysa tartanka loogu jiro saxiixa Sergio Ramos? – Gool FM
(Madrid) 17 Juun 2021. Waa la warinayaa kooxda haatan ku horreysa tartanka loogu jiro saxiixa Kabtankii kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos, kaasoo xalay la xaqiijiyey inuu ka tagayo kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
Kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa la soo warinayaa inay hoggaanka u hayso tartanka loogu jiro daaficii Real Madrid ee Sergio Ramos.
Jariiradda AS ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warinaya in Manchester City ay tahay haatan kooxda hoggaanka u haysa uguna cad-cad tartanka loogu jiro saxiixa Sergio Ramos.
Daafacan ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa isku diyaarinaya inuu beeca xorta ah kaga tago kooxda Real Madrid, Tababare Pep Guardiola ayaana diyaar u ah in 35-sano jirkaan uu u soo bandhigo heshiis uu uga mid noqonayo kooxda ku guuleysatay horyaalka Premier League.
Marka laga soo tagay Manchester City, Ramos ayaa sidoo kale la la xiriirinayaa kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Man United, Chelsea, Juventus, PSG, Bayern Munich iyo Inter Miami.